मार्च 1, 2019 नोभेम्बर 4, 2019 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments
पौराणिक र प्रचलित मान्यता अनुसार शिवको नेत्रबाट रुद्राक्षको उत्पत्ति भएको विभिन्न शास्त्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ । परापूर्वकालदेखि नै रुद्राक्षलाई पूर्वीय साधुसन्तले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । रुद्राक्षको धारणले हामीमा भएको कुनै पनि समस्याको समाधान गर्ने क्षमता वृद्धि हुने गरेको धार्मिक आस्था रहदै आएको छ । आयुर्वेद विज्ञानमा रुद्राक्षलाई महाऔषधिको रुपमा लिइन्छ । रुद्राक्ष धारण गरे रक्षात्मक शक्ति प्राप्त हुने विश्वासका कारण यसलाई विभिन्न रूपमा प्रयोग गरिन्छ । पछिल्ला दिनमा रुद्राक्षको शक्तिको वैज्ञानिक परीक्षण समेत भएका छन् ।
हिन्दू धर्ममा रुद्राक्षलाई विशेष महत्व दिइन्छ । यो नेपालसँगै भारत, इन्डोनेसिया, बर्मा आदि देशका पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ । रुद्राक्ष दुईवटा शब्द मिलेर बनेको हुन्छ, रुद्र र अक्ष । जसको शाब्दिक अर्थ रुद्रको अक्ष अर्थात् भगवान् शिवको आँखाबाट उत्पत्ति हुने आँशु हो । अध्यात्मसँग जोडेर हेरिने रुद्राक्षलाई भौतिक संसारमा हुने दुःख हटाउने र सकारात्मक ऊर्जा दिने फल मानिन्छ ।
रुद्राक्षलाई विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसमा हुने धर्काहरूलाई मुख भनिन्छ । तिनै मुखका आधारमा यसको वर्गीकरण भएको हो । रुद्राक्ष एकमुखेदेखि २७ मुखेसम्म भएको विश्वास गरिन्छ । एकमुखे, नौमुखेदेखि १४ मुखेसम्मका रुद्राक्षलाई दुर्लभ मानिन्छ । पाँचमुखे रुद्राक्ष भने सहज रूपमा पाइने गर्छ । यसमा हुने मुखका आधारमा सुख, शान्ति, मोक्ष, पाप, धन प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन र आयुसँग जोडेर हेरिन्छ ।
खासगरी श्रावण महिना, सोमबार, पूर्णिमा र सूर्य वा चन्द्रग्रहणका दिन रुद्राक्षको माला विशेष श्रद्धापूर्वक लगाइने गरिन्छ । यसरी लगाएर हिँड्दा शारीरिक दुर्बलता हट्नमा सहयोग पुग्नुका साथै मानसिक तनावसमेत कम गर्ने मान्यता छ । रुद्राक्षको मालाले व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक शक्ति बलियो हुनुका साथै घरपरिवारमा सुख शान्तिसमेत आउने विश्वास छ । तर, रुद्राक्षको माला लगाउँदा केही नियम भने पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै, रुद्राक्ष धारण गर्ने मानिसले मासु, लसुन, प्याज, र नसालु पदार्थ खान नहुने भन्ने छ । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार नियम पालना नगरी रुद्राक्ष लगाउँदा नोक्सान पुग्छ । रुद्राक्षको माला अभिमन्त्रित गरेर लगाएमा संसारमा अस्तित्वमा रहेका जुनसुकै रोग पनि निको हुन्छ भनिन्छ ।
१. चारमुखे रुद्राक्षलाई दूधसँग मिसाएर सेवन गर्दा वा पूजा गरी धारण गर्दा मानसिक रोग निको हुनुका साथै स्मरण शक्तिसमेत बढाउँछ ।
२. पाँचमुखे रुद्राक्षलाई गाईको सुक्खा गोबर र गंगा जलमा मिसाएर शरीरमा लगाउँदा छालासम्बन्धी रोगका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
३. रुद्राक्षको माला लगाउँदा रक्तचाप नियन्त्रण हुन्छ ।
४. तामाको भाँडोमा भिजाएर राखेको रुद्राक्षको रस नियमित सेवन गर्दा पेटसम्बन्धी रोग निको हुन्छ ।
५. रुद्राक्षलाई विधिपूर्वक पूजा गरेर धागोको सहायताले कम्मरमा बाँध्दा मुर्छा पर्ने, हिस्टेरिया, ज्वरो, कम्मरको दुखाई हटाउन मद्दत पुग्छ ।
६. रुद्राक्षको स्पर्शले मात्रै पनि रक्तचाप र हृदयरोगका बिरामीलाई फाइदा पुर्याउछ ।
← राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथ : व्यक्ति र व्यक्तित्व
कोदो र यसका फाइदाहरु →
2 thoughts on “रुद्राक्ष र यसको महत्त्व”
Pingback:१२ मुखी रुद्राक्ष धारण गर्दा हुने फाइदाहरु
Pingback:यस्ता छन् महाऔषधि रद्राक्षको प्रयोगबाट हुने फाइदाहरु, जानी राखौ